Tuesday April 15, 2014 - 11:04:53 in Maqaallo by Shaqaalaha Burcoonline News
Beesha Ugaadh Aadan Maxamed (Aadan-Madoobe), inteedii dagaalkii sukeeye ee qarnigii 19aad iyadu Galbeed uga soo haajirtey, ayaa sida la wada ogyahay, ee taariikhdu-ba ay innoo bayaamisey, ayaa iyadu aasaaskii is-bahaysigan Toljecle, kaalin mug leh ka qaadatay.
Beesha Ugaadh Aadan (Aadan Madoobe) ka hor, beel Toljecle ah, oo Galbeed laga yaqaanney i, ma aanay jirin. Jilibbadan Toljecle ee haddeerna, jilib waliba beel kale ayuu mag-wadaag la lahaan jirey. Waxana mag ay magac Toljecle ku wada bixiyaan ugu horeysey, markii ay beesha Ugaadh Aadan (Aadan Madoobe) ay magacan Toljecle, ay kula bahoobeen.
Is-bahaysigan oo dhaqan-galay qarnigii 20aad, ayay iyadu – waa beesha Ugaadh Aadan Galbeed e – ay horseed ka ahayd, oo ay iyadu bud-dhig u ahayd. Waxa ay beeshani ahayd: maskaxdii iyo muruqii uu Toljecle-han maantu uu ku dhismay, ee uu ku hana-qaaday. Waayo, beesha Ugaadh Aadan Madoobe-Galbeed, ayaa iyadu tira ahaan iyo deegaan ahaan-ba ugu badnayd.
Hoggaan ahaan, ama madax-dhaqameed ahaan-na, iyada – waa beesha Ugaadh Aadan e – ayaa Toljecle u arrimin jirtey, oo (chief) Caaqil Yuusuf Nuur (Cadde) iyo (Baalabaad) Iimaan Wacays (Iimaan Toljecle), oo labadoodu-ba beesha Ugaadh Aadan ahaa, ayaa iyagu garta goyn-jirey.
Sawirkan Hoose Waa Beeshe Ugadh aadan ee Bahwadaagta la ah kuna jirta Toljecle deegaankeeduna yahay Gobolka Maroodijeex ilaa jigjiga, Waana Ugaadh Adan Mohamed Abokor
Haddaba sida guud ahaan, ay beesha Aadan-Madoobe oo idil i, ay u kala deegaanka noqotay, ayay inteeda Galbeedna ay u kala ood noqotay. Tusaale ahaan, waxa Ugaadh Aadan ah, oo aan haddana maanta Ugaadh Aadan lagu tirinnin: reer Dhuxul, jifo ay dadka badhkood reer Siciid ku tiriyaan iyo qaar kale oo badan.
Waqtigan is-bahaysigu uu Galbeedka ka samaysmay, ayaa ku beegan xilligii ay beesha Habar Toljecle ama Toljecle, ay magacii iska baddaleen, ee ay Habar Jecle la wada baxeen. Waayo, intii aanu magaca Habar Jecle soo bixin, waxa beesha loogu wada yeedhi-jirey – waa marka magaca Habar Toljecle la soo gaabiya e: Toljecle.
Waxana taas u dalliil ah:
Dirir Warsame – Yeesif Maxamed
Toljecluhu ninkii maag is yidhi, waa muslimiyaaye.
Maxamed Nuur Fadal -Nuux Maxamed
Toljeclaha dhawaaqii la yidhi, waxan ka dhiifraacay.
Maxamed Aadan Caws (Yawle) – Habar Yoonis
Nabadda u dihanaaya
Dood yar baan u tiraabay.
Sayid Maxamed Cabdulle Xasan – Ogaadeen
Toljeclaha muraadkayga iyo, masafadayda ula taga.
Axmed Jaamac Cali (Caad-leef) – Aadan Maxamed
Toljecluhu ramaaskiyo ka badan, roobkan Xays helaye.
Ugu ma danbeyn:
Magacyadu waa ay is-bad-baddali karayaan, laakiin abtirsiintu waa mid, oo waa halkeeda.
Mohamed Sheekh Daahir